Afjarno Samsung Galaxy S5 badan oo ka mid ah faa'iidooyinka, sida flash ROM caado waxay keentaa, ka saar bloatware, rakibi app u baahan helaan xididka, cusboonaysiiso Android version, iyo wixii la mid ah. Haddii aad rabto in aad ka rujin Samsung Galaxy S5 laakiin wax fikrad ah sida loo sameeyo, waxaad tahay meel sax ah. Hagaha hoos ku qoran aad Socon habka rooting oo dhan.
Qaybta 1. Waxyaabaha la sameeyo ka hor inta Samsung Galaxy S5 soo afjarno
Qaybta 2. Sida loo xidid Samsung S5 la MobileGo
Ka hor inta aanad bilaabin, waxaa wax aad u baahan tahay inaad ogaato.
Afjarno aad Galaxy S5 oo maqani Samsung damaanad, si labo jeer ku saabsan qabaa inta aanu goyn loo sameeyo.
Xog muhiim ah ee kaabta aad Galaxy S5 ay dhacdo waa in aad khasaare xogta.
Hubi in aad Galaxy S5 uu leeyahay ugu yaraan 80% batteriga.
U hubso in aad ku rakiban darawalka USB ee aad Samsung Galaxy S5 kombiyuutarka.
Sahlo USB debugging doorasho ee xunbo Settings > fursadaha Developer .
Wondershare MobileGo waa desktop software xididka ah ee Samsung Galaxy S5, iyadoo aan loo eegin ay side isagoo T-Mobile, qaran, AT & T iyo Verizon. Waa awood leh oo si sahlan loo isticmaalo. Iyadoo click hal, waxa aad maamuli in ay ka rujin aad Samsung Galaxy S5. Qaybta soo socda uu kuu sheegayaa sida loo sameeyo ee faahfaahin ah. Akhri.
Tallaabada 1. Run MobileGo on PC
Bilowga aad, dejisan iyo rakibi MobileGo aad kombuutarka. Waxaa Launch inay soo qaadaan ay suuqa kala hoose.
Tallaabada 2. Isku aad Samsung S5 in ay PC via WiFi ama Cable USB
Si fudud furaysto cable USB ah oo wuxuu galay si aad u hesho Samsung S5 xiran PC. MobileGo si deg deg aqoonsan doonaa Samsung S5 oo soo dajiyo waa-leeyihiin MobileGo APK fayl ku yaal si toos ah. Markaas, aad Samsung S5 tusi doonaa in uu furmo suuqa hoose.
Haddii kale, waxaad u tagi kartaa shabakada WiFi, iyo download waa-leeyihiin MobileGo APK soo gudbin on your Samsung S5 gacanta. Markaas, file APK MobileGo u furan lambarka sirta QR ee MobileGo desktop-ka si ay u xiriiriso. Ka dib markii ay ku xiran, aad Samsung S5 u muuqataa in uu furmo suuqa hoose.
Tallaabada 3. Start in Root Samsung S5
Tag galeeysid ka tegey oo guji Qalabka. Daaqadda Qalabka ah, guji Hel Root Access. MobileGo bilaabaa inuu ka rujin aad Samsung S5. Inta lagu guda jiro habka rooting ah, waa in aad barkinta aad Samsung S5. Marka way dhamaatay, aad Samsung S5 waa laga rujin doonaa.
Articles badan oo ku saabsan Samsung soo afjarno
Sida loo xidid Galaxy Mini S5570
Sida loo xidid Samsung Galaxy Ace S5830I
Sida loo xidid Samsung Galaxy S2
Sida loo xidid Samsung Galaxy S I9000